Virus ကိုက်နေလို့ — MYSTERY ZILLION
June 2008 edited September 2008 in Antivirus & Virus
ကျွန်တော့ pendrive ထဲမှာ svchost ဆိုတဲ့ virus လား trojanလား မသိတဲ့အကောင်တစ်ကောင်၀င်နေတယ်ဗျ:14::14:။ သီချင်း folder လေးနဲ့တူတယ်။ သတ်လို့မရဘူး ဖျက်လို့မရဘူး။ task manager မှာဆို အများကြီးပဲ run နေကြတာ:((:((။ သူ့ extension .exe ကို rename လုပ်ပြီးဖျက်ကြည့်သေးတယ်။ ပျက်တော့ပျက်သွားတယ:P်။ ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာပြန်ရော:13::13:။ အဲ့ဒါနဲ့ task manager မှာ run နေတဲ့ကောင်တွေကို end process လုပ်ပြီး delete လုပ်မယ်ပေါ့။ task manager မှာ end process လုပ်ရင်းနဲ့ shut down လုပ်ရမယ်တဲ့ error တက်လာတယ်:2:။ window လဲပြန်တက်လာရော error တွေတက်ပါလေရော:14::14::14:။ ကြုံဖူးတဲ့သူများပြောပြပေးကြပါ။ :77::77:
ကိုstar ကလည်း ဗိုင်းရက်စ် က ကိုက်ပဲကိုက်နိုင်လွန်းတယ်။ :106:
ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံယူမလား။ ကျွန်တော်ဆို ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကို desktop ပေါ်တင်ထားတာ မတတ်တော့ဘူး။ :67:
ဟဲဟဲ စတာနော် . . .
စိတ်မဆိုးနဲ့ . . .
ဒီလောက်လဲ စိတ်မညစ်နေပါနဲ့။ သိတဲ့လူတွေ ဖြေပေးကြပါလိမ့်မယ်။ :101: ကျွန်တော်ကတော့ သိဘူး။:D
မသိဘူးလို့ reply ပြန်တာကျေးဇူးပါနော်။ ကို yeman ပြောမှ သတိထားမိတော့တယ်။ ကျွန်တော်က desktop ပေါ်မှာ ပန်းသီးပုံလေးတင်မိတာကိုး။aha နောက်တာ သိတဲ့လူတွေဖြေကြမှာအသေအချာပဲမို့ တို့ကတော့မပူပေါင်။
kaspersky7နောက်ဆုံး update ကသိတယ်..
kaspersky6ကတော့ မသိဘူးထင်တယ်..
system32\_svchost.exe is windows Components, cannot do end Task (will shutdown if it stopped)
အဲ.. သူက အဲလောက် မဆိုးဘူး.. သူက C:\_Windows\_System32\_Repair မှာလားမသိဘူး ထားတယ်... Task Manager မှာ User name နဲ့ပေါ်တယ်.. အစစ်တွေက system သို့မဟုတ် တခြား တစ်ခုခုနဲ့ပေါ်တယ်.. virus ကတော့ svchost.exe ပြီးရင် ဘေးမှာ username အဲလိုပေါ်တယ်..
system 32 ကဟာဆိုရင်တော့ svchost.exe ပြီးရင် system ဆိုပြီးပေါ်တယ်... ဖျက်လို့ရပါတယ်.. svchost.exe ဆိုတာကို End Process Tree လုပ်... ပြီးရင် C:\_Windows\_Repair လား.. ဘာလားတော့ သေချာတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး.. အဲမှာ အရင်ဖျက် ပြီးမှ drive ထဲက ဟာ ကိုဖျက်လိုက်ပေါ့
C:\_windows\_system32\_restore\_svchost.exe ကို rename ပေးပြီး delete လုပ်ရင်ရတယ်ဗျ:5::5:။ ခုတော့လျှောသွားရှာပြီဗျာ\_:D/\_:D/:65::65:အသံလေးတောင်မကြားလိုက်ရဘူး။ ပျောက်သွားပြီ။
ရသေးဘူး ကိုစေတန်ရေ ..
end process လုပ်တာ shutdown ကျသွားတယ်...
C:\_Windows\_System32\_Restore မှာလဲ မတွေ့ဘူး
C:\_Windows\_Repair မှာလဲမတွေ့ဘူး ..
cm17 wrote: »
svhost.exe ဘေးမှာ Username ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်၀င်ထားတဲ့ Username နဲ ့Runနေတဲ့ svhost.exe ကို End Process Tree လုပ်ပါ။ C:\_Windows\_system32\_restore\_ အောက်မှာရှိတဲ့ data နဲ့svhost.exe ကို shift+delete လုပ်ပါ။ data နဲ့svhost.exe ကိုမတွေဘူးဆိုရင် Start>Control Panel>Folder Option>View tab မှာ Hide Protected Operation System File မှာ click လုပ်ထားတာလေးကို ဖြုတ်ပြီးပြန်ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Delete Process လုပ်ပြီးရင် restart ချလိုက်ပါ။
ကျနော်က အဲဒီ spy emergency နဲ့အိုခေသွားလို့ အဲဒါကို ကြော်ငြာသလိုဖြစ်နေပြီ။
boot in Safe Mode & unrar and run it.
i hope ur system will be ok.
virus နာမည်က one missed call တဲ့ဗျ..
C:\_WINDOWS\_ အောက်က autorun.inf & one_missed_call.txt ရောက်နေရင်
အဲဒီ virus ၀င်နေပြီ.
ကျွန်တော်ကတော့ safe mode ထဲ၀င်ပြီး သမလိုက်တာပဲ
C:\_WINDOWS\_system32\_Restore အောက်က data ဆိုတဲ့ folder ရယ် svchost.exe ရယ်
C:\_WINDOWS\_system32\_ အောက်က del.exe & dir.exe ကို shift del နဲ့ ဆော်ထည့်လိုက်..
ပြီးရင် msconfig က startup မှာ ရှင်းလိုက်ရင် ကိစ္စ တုံးသွားပြီ
hi i found text which included at one_missed call.txt
I think! something is wrong in my computer.
I can't delete Thumbs.db file from my MP3 songs folder permanently.
When I delete that file, it is disappear temporarily.
Who know about it?
Please help me how to do!
It's notavirus. It appears when u change ur image view to Thumbnails.
It will not appear again ,if u change view to Tiles or anything except Thumbnails after u delete Thumbs.db.
ကျနော့်စက်မှာ Thayet Myo Hacking Day! ဆိုတဲ့ စာတန်းပေါ်လာပြီး ဘာမှသုံးလို့မရတော့ဘူး ... ဘယ်လို kill ရမလဲ ... ဘာမှသုံးလို့မရတော့ဘူးဗျို့ :106::106:
ကိုစေတန့်ကိုမေးတာ ကျွန်တော်၀င်ပြီးလျှာရှည်ပါရစေ။ ကိုစေတန်ခွင့်လွှတ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးပဲသိသူများရှိရင်လည်း ..။ ဒီဟာလေး Download လုပ်ပြီး Run ကြည့်ပါလားခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ။
noor wrote: »
ကျေးဇူးပါကို noor ရေ ... Thankalot!
http://www.processlibrary.com/search/?q=svchost.exe ဒီမှာ ကြည့်ကြည့်ကြပေါ့လေ... အမျိုးမျိုးပြောကြတာပါပဲဗျာ..svchostနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့... (ဆရာကြီးလေသံနဲ့ပြောတယ်လို့မထင်ကြပါနဲ့)
KaungKimpyar ရေးတဲ့ မြန်မာစာလုံးတွေက ကောင်းကောင်းမမြင်ရပါလား၊။:O:O
ကိုဇူးလူးညွှန်းတာနှင် ့spy emergency ကိုစမ်းကြည် ့တာ...အကောင်တွေတွေ ့တယ်ဗျာ...ကျေးဇူးပဲကိုဇူးလူရေ